लिंग सूर्य ("सुसी") बताउनको लागि एक अद्भुत कथा छ। उनी ग्रामीण चीनको एउटा सानो फार्ममा जन्मेकी थिइन्। आज उनी न्यु योर्क शहरमा गुगल सफ्टवेयर इन्जिनियर हुन्। उनले यो कसरी गरिन्?
मध्य चीनको हुनान प्रान्तमा लिंगको समुदायमा केटीहरू कहिल्यै हाई स्कूलमा गइहाल्दैनन्, र फार्मलाई सहयोग गर्ने र उनीहरूको आफ्नै परिवार हुने आशा गरिन्छ। वास्तवमा परिवारको आर्थिक आवश्यकतामा सहयोग पुर्‍याउन उनले १ 13 वर्षको उमेरमा स्कूल छोड्नुपरेको थियो।
तर यस शिक्षाले उनलाई कलेजमा प्रवेश गर्न अनुमति दिँदैन, त्यसैले उनी शेन्जेनमा फ्याक्ट्री कामदार भए। कामको तालिका बोरिंग थियो, त्यसैले उनले केहि महिना पछि कारखाना छोडिन् र कम्प्युटर प्रशिक्षण कार्यक्रममा विद्यार्थी भएकी, आशा छ कि यसले उनलाई अझ व्यावसायिक जीवनको लागि कौशल प्रदान गर्दछ।
भर्खरको एउटा अन्तर्वार्तामा लिंगले दक्षिण चाइना मार्निंग पोस्टलाई बताइन कि उनको आधारभूत प्रेरणा सधैं "दिनदिनै नयाँ कुराहरू सिकिरहनु हो।" तसर्थ, जागिर जारी गर्दा उनले अ studied्ग्रेजी पढी र शेन्जेन युनिभर्सिटीको साथ दूर शिक्षा डिग्री प्रोग्राममा भर्ना भएकी। धेरै ऊर्जाको साथ एथलेटिक हुनाले, उनले व्यायाम पाउन र अधिक सांसारिक अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको साथ अरुबाट अ way्ग्रेजी सिक्ने तरिकाको रूपमा अन्तिम फ्रिसबी खेल्न पनि शुरू गरेकी थिइन।
लिंग लागू गरियो र हाम्रोमा स्वीकार गरियो महर्षि विश्वविद्यालयको प्रबन्धन मा कम्प्युटर पेशेवर मास्टरको कार्यक्रमशिकागोको दक्षिण पश्चिममा लगभग 230 माईल अवस्थित छ। नौ महिना क्याम्पसमा अध्ययन गरेपछि, बहुमूल्य क्यारियर रणनीति कार्यशाला र धेरै अन्तर्वार्ताहरू सहित, सूर्यलाई गुगल विक्रेता, ईपीएएम प्रणालीहरूको साथ सफ्टवेयर इञ्जिनियरको रूपमा प्रस्ताव गरिएको थियो।
अक्टूबर २०१ in मा MUM मा आइपुगेपछि यहाँ लिंग सूर्य छ।
गुगलको म्यानहट्टन मुख्यालयमा ठेक्का सफ्टवेयर ईन्जिनियरको रूपमा लिingले शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयका सहकर्मीहरू पाएकोमा भाग्यशाली महसुस गर्यो — कोही पीएच.डी. डिग्री "तर तिनीहरू मध्ये कसैले पनि मलाई यस्तो व्यवहार गर्दैनन् किनभने म यी सबैको योग्य छैन,"उनले साउथ चाइना मोर्निंग पोस्टसँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन। "यही कुरा अमेरिकाको बारेमा मलाई मनपर्‍यो: उनीहरूले तपाईले गरेको कामलाई भन्दा तपाईले गर्न सक्ने क्षमताको मोल गर्छन्।"
एमयूएममा बिताएको समयको बारेमा, उहाँ विशेष शैक्षिक वातावरण, विद्यार्थी र संकाय जनसंख्याको विविधता, र यहाँ बनाइएका धेरै साथीहरूको सराहना गर्नुहुन्छ। उनी थप्छिन्, "फेयरफील्डमा बिताएको हरेक पल मलाई मनपर्‍यो (MUM मा)।"
उनको सल्लाहकार, प्रोफेसर मेई ली भन्छिन्, "सुसी जहिले पनि आफ्ना सबै क्रियाकलापहरूका बारे सकरात्मक र उत्साहित थिइन्। उनी एक राम्रो विद्यार्थी थिए, सबैको साथी थिइन, र खेलकुद लगायत धेरै क्षेत्रमा असाधारण प्रतिभाशाली। "
डिसेम्बर २०१ in मा उनको स्नातकोत्तर डिग्री पूरा गरेपछि लिंगलाई आशा छ कि उनका आमा बुबा अमेरिका अमेरिका आएर उनको क्याम्पसमा स्नातक हेर्न आउनेछन्। यो उनको आमाको लागि पहिलो पटक हो चीनमा आफ्नो गृहनगर छोड्न!
लिंग सूर्यको अर्को व्यावसायिक लक्ष्य भनेको घर भित्र रहेको Google सफ्टवेयर ईन्जिनियर बन्नु हो। उनी भन्छिन्, "यो सजिलो हुँदैन, तर तपाईको जीवन तपाईको आराम क्षेत्रको अन्तमा सुरु हुन्छ।"
लिंग सूर्यको उल्लेखनीय जीवनको बारेमा अधिक पढ्न, कृपया यसलाई पढ्नुहोस् लेख दक्षिण चीन प्रभात पोष्टमा।